Kedu esi esi edozi nhazi LXDE? | Site na Linux
Kedu esi esi edozi nhazi LXDE?
LXDE ka bụ ebe desktọọpụ na-ewu ewu, n'agbanyeghị afọ ndụ ya, ọ bụ ezie na ọ bụ n'ihi nke a ị gaghị enwe ike ịme nkwado ngwa ngwa site na mbupụ ihe na Dconf.
Kama nke ahụ, ọ bụrụ n'ịchọrọ ịdebe ntọala ị mere na gburugburu desktọọpụ LXDE gị, ha ga-achọ ịmepụta nkwado ndabere nke folda ~ / .config.
Inwe ike ime bakcup a site na LXDE Anyị nwere ike ime ya site na ịmepụta faịlụ abịakọrọ nke folda ahụ kwuru ka anyị nwee ike ịchekwa akwụkwọ a karịa ọsọ ọsọ.
Mgbe ahụ dị na-agba ọsọ na-esonụ iwu ime ya:
N'ihi na mgbe ị na-eme nkwado a ọ gụnyere ntọala gburugburu ebe obibi, yana ihe nchọgharị na nsogbu nwere ike ịnwe ozi dị nfe Anyị nwere ike ịgbakwunye usoro nchekwa na akwụkwọ a, iji kpuchido data echekwara.
Usoro a nwere ike ịbụ nhọrọ.
Ka ọ were anyị ga-eji ngwa GnuPG, nke anyị nwere ike iwunye na iwu ndị a
Debian, Ubuntu, Linux Mint na nkwekọrịta:
Emechara nbudata anyị ga-eme ihe nzuzo nke faịlụ a na iwu na-esonụ:
N'ebe a, ha gha mejuputa arịrịọ paswọọdụ nke gosipụtara na njedebe ha iji mezue usoro ezoro ezo.
Ka ọ were ha agha ekenye paswọọdụ ha na-echeta ma dị mma. Mgbe izo ya ezo zuru ezu, ị ga-ahụ backup.tar.gz.gpg n'ụlọ gị ndekọ.
Mgbe ebugote nkwado ndabere na ebe nchekwa, ha nwere ike ihichapụ faịlụ .tar.gz nke jere ozi dị ka ihe ndabere maka izo ya ezo.
1 Ndabere isiokwu na akara ngosi
1.1 Weghachi ndabere
Ndabere isiokwu na akara ngosi
Dika ikwesikwara ima, akuku nke nhazi na ihu ihe anya nke desktọọpụ bu isiokwu na akara ngosi, yabụ anyi nwere ike kwado ha n’usoro a
Ha kwesịrị ịma na e nwere ụzọ ụzọ abụọ esi echekwa ha, ebe nke kachasị dịkarị bụ nke dị na folda "/ usr" na mgbọrọgwụ nke faịlụ faịlụ. Ọnọdụ ọzọ nke ọ na-enwekarị bụ n'ime nchekwa nkeonwe na "/ ụlọ".
O zuola na ha na-achọ nchekwa na nke nwere folda ahụ na ha ga-akwado ya.
/ usr / share / akara ngosi y / usr / share / gburugburu ma ọ bụ ~ / .icons na ~ / .mgbe.
Ya ịmara ụzọ ebe echekwara akara ngosi gị na isiokwu gị, gbue iwu na-esote dochie "ụzọ" ya na ụzọ ebe ịchekwara ihe ị ga - edobe:
Ugbu a niile isiokwu omenala na akara ngosi dị na faịlụ TarGZ, lThe ndabere zuru ezu na abịakọrọ faịlụ nwere ike a ga-azoputa na ígwé ojii, a USB ndị ọzọ diski ike ma ọ bụ ihe ọ bụla ha bu n'uche ime na ha.
N'ikpeazụ, iji nwee ike iweghachi nhazi gị na sistemụ ọhụrụ ma ọ bụ ọ bụrụ na ị kpebiri ịkọrọ ya onye ọzọ ma ọ bụ na kọmputa ọzọ, ha ga-ebudata ma ọ bụ jikọọ ngwaọrụ ebe ha zọpụtara faịlụ ndị abịakọrọ.
Iji decompress na decrypt LXDE bakup ị ga-pịnye iwu na-esonụ:
Ebe e kenyere paswọọdụ ekenye gị. Ozugbo ebipụtara, anyị ga-aga n'ihu iji weghachi faịlụ ahụ na ndekọ ụlọ gị site na iwu tar.
Mgbe ị weghachite faịlụ nhazi gị, wepụ faịlụ akara ngosi na faịlụ isiokwu na tar.
Otu ihe a na-emetụta akara ngosi
Ọ bụrụ na ọ rịọ maka ikikere, ha na-agbakwunye sudo n'ụzọ dị otú a:
Mgbe akara ngosi dị n'ọnọdụ, desktọọpụ LXDE gị Ikwesiri ịmalitegharịa usoro gị nke mere na mgbanwe nke nhazi nchekwa na-kwajuru na mmalite na gị usoro onye ọrụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Nkuzi / Ntuziaka / Atụmatụ » Kedu esi esi edozi nhazi LXDE?
Ozi dị mma banyere nhazi LXDE
Zaghachi Bill Emia
Linux 4.19-rc5: wepụtara n'aka Greg mgbe ihe mere ...
SparkleShare: ngwa ọrụ maka mmekọrịta igwe ojii